Lionel Messi oo deeq lacageed uga qeyb qaatay dadka dalkiisa Argentine ee la dhibaataysan faafaha Coronavirus – Gool FM
Lionel Messi oo deeq lacageed uga qeyb qaatay dadka dalkiisa Argentine ee la dhibaataysan faafaha Coronavirus
(Barcelona) 12 Maajo 2020. Kabtanka Kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa deeq lacageed uga qeyb qaatay dadka dalkiisa Argentine ee la dhibaataysan faafaha Coronavirus.
Hay’adda Taakulada ee Lionel Messi Foundation ayaa lacag ku caaisay Hay’adaha caafimaadka ee Waddankiisa, waxaana uu Messi sidaas ugu biiray ololaha loogu magac daray ‘Jungtos por la salud Argentina’ oo macnaheedu tahay ‘Aynu u midowno caafimaadka Argentine’.
U jeedka aynu u midowno caafimaad Argentine ayaa ah in lagu uruuriyo dhaqaale iyo agab caafimaad oo lagu wareejiyo hay’adda caafimaadka si ay loogu adeego dadka qaba caabuqa Coronavirus.
Xiddiga reer Argentine oo hore lacag 1 milyan oo Euro ah ugu wareejiyey hay’adaha caafimaadka Spain, waxa uu markan u leexday dhinaca dalkiisa, waxaanu 500,000 milyan ugu deeqay Garraham Foundation oo ka shaqaynaysa hawlaha qaaraanka uruurinta ee dalkaas.
Lionel Messi ayaa lacagta uu bixiyey waxaa loo qeybiyey lix isbitaal oo ku kala yaalla Santa Fe, Rosario, Canuelas, San Martin iyo Buenos Aires.
Agaasimaha Garraham Foundation ee Silva Kassab ayaa xaqiijiyey in lacagtu ay soo gaartay, waxaana uu u mahadceliyey xiddiga xulka qaranka Argentine, isagoo yiri: “Waxaanu aad uga mahad-celinaynaa aqoonsiga ay shaqadayadu heshay ee noo ogolaanaysa inaan sii wadno ballan-qaadka caafimaadka shacabka reer Argentine.”
Waxa uu dalka Argentine muddooyinkii dambe ku soo biiray waddammada uu sida ba’an u saameeyey faafaha coronavuris, waxaana illaa iyo haatan u ku dhacay dad kor u dhaafaya 6,034 iyadoo ay dhibteen dad 305 ruux ka badan.
Real Madrid, Barcelona & Man City oo wada xiiseynaya xiddig ka tirsan Kooxda Bayern Munich
War cusub oo ka soo baxaya xaaladda Neymar Jr & Dib ugu laabashadiisa Kooxda Barcelona